Daawuud Ibsaa dantaa mataa isaatiif malee danta QBO fi dantaa tokkummaa Oromoo hin qabu.. -
Daawuud Ibsaa dantaa mataa isaatiif malee danta QBO fi dantaa tokkummaa Oromoo hin qabu..
bilisummaa June 8, 2016	4 Comments
Shanee: Maafiyaa Horroo Guduruu
Akkuma har’a hunduu hubatu, Shaneen Maafiyaa Horroo Guduruu ti. Itti gaafatamaan ol’aanaan
Maafiyaa kanaa Obbo Daawuud Ibsaa ti. Yeroo dheeraa keessatti, Daawuud Ibsaa dhoksaan
Maafiyaa kana ABO keessatti ijaaraa ture. Ijaaruu duwwaa osoo hin taane, sadarkaa hundatti
namoota Horroo Guduruu itti remade. Maafiyaan kun, hamma ijaarameen booda yakka hamaa fi
hammaataa daangaa hin qabne qabsoo Oromoo, ABO, fi miseensota ABO irratti raawwataa
jiraachuun isaa oolee fi bubbulee jira. Yeroodheeraa irraa jalqabee hamma har’atti Maafiyaan
Horroo Guduruu kun, qabsoon bilisummaa Oromoo akka hin milkoofineef danqaraa fi daggaraa
ittatti ta’ee jira. Murni kun, naqarsa (“cancer”) qabsoo keessaa ta’uun isaa har’a ifatti mul’atee
jira. Dhugaan turee fi jiru
Daawuud Ibsaa, daantaa mataa isaatiif malee daanta QBO fi daantaa
tokkummaa Oromoo hin qabu
; qabaateellee hin beeku. Namuu hubatuu kan qabu, Dawuud Ibsaa
namoota ganda isaa, namoota Horroo Guduruu, qoofa bakka hundatti rammaduu isaa ti.
1. Obbo Jirreenyaa Taffaraa Itti gaafatamaa Jaarmaa biyya Awuroppaa—-Horroo Guduruu;
2. Obbo Gaashuu Lammeessaa, Itti gaafatamaa Jaarmaa biyya Awustiraaliyaa—Horroo
3. Dr. Shuguxee Galataa, Itti gaafatamaa Damee Diploomaasii ABO—Horroo Guduruu;
4. Obbo Mikaa’eel Boranaa, Itti-gaafatamaa Jaarmaa Abba Seeraa fi Alangaa; Itti-gaafatamaa
Jaarmaa, Damee Beeksisii biyya Alaa; Itti-gaafatama Jaarmaa Damee seeraa fi toohanoo,
akkasumas Itti-gaafatamaa Jaarmaa,Damee Diinagdee USA fi Kanaadaa ti—Horroo Guduruu.
Asirratti kan nama ajaa’ibuu fi maalalchiisu, nama tokko irratti aangoon heddu tuulamuu isaa ti.
5. Aadee Dinknesh D. Kitilaa, Ijaarsa dhokkissaa namoota nannoo Horroo Guduruu ijaaruu fi Itti
gaafatamtuu ‘International Oromo Women organization (IOWO)’ jedhutti rammade—Horroo
6. Obbo Tashomee Diimee, ‘International Qeerroo Support Group’ USA fi Kanaadaatti
7. Obbo Girmaa Xurunaa, ilma obbolleettii isaa Itti-gaafatamaa Qeerroo biyya keessaa, Itti-
gaafatamaa Raadiyoo Sagalee Qeerroo fi Itti-gaafatamaa Diinadgee biyyaa keesaa ti—–
8. Obbo Lammii Shunaa…miseensa Maafiyaa ti—Horroo Guduruu.
Dhuugaan lafa jiru, Maafiyaan Horroo Guduruu kun dhimma mataa isaatiif jecha ABO keessatti
diimokraasii dhabamsiise. Bakka diimokraasii abbaa-irrummaa, gandummaa fi dabaanbulina
(corruption) biqilchee fi magarsee sirna ittiin masakkamu kan tokkummaa Oromoo fi qabsoo
bilisummaa Oromoo ittiin laamshesu godhate.
Sinuma diriirtate kana irratti irikatee, Obbo Dawuud Ibsaa saganataa ABOn alaatti aangoo isaatti
dhimma ba’uun hojiin qabsoo fuula duratti akka hin tarkaaffanne godhaa ture; ammallee godhaa
jira. Maallaqni maqaa qabsoon walitti qabamu, bakki dhaquu fi ga’uu hin beekkamuu. Yeroo
gaafiin itti ka’u, WBOf ergame jechuun ala ragaan qabatamaan (accountability and transparency)
hin jiru. Murni Maafiyaa kun, gama tokkoon ABO diiga; qabsoo bilisummaa laamshessa. Gama
biraatiin ammoo, maqaa qabsoo fi maqaa ABOn maallaqa lammiwwaan Oromoo irraa guura.
Waggaa kudhanii saddeeta guutuu, maqaa Guyyaa WBOn, Guyyaa Gootoota Oromoon, Guyyaa
Fincila Diddaa Garbummaan fi amma ammoo maqaa ‘International Qeerroo Support Group’
jedhuun caasaa Maafiyaa Horroo Guduruu addunyaa keessa diriirsee lammiiwwaan Oromo
gowwomsuudhaan maalaqa guuree daldala adeemsisaa jira. Kana duwwaa odoo hintaane,
maallaqa guurame kanaan gootoota Oromoo biyyaa keessatti dhabamsiisaa jira. Maafiyaan kun,
afaaniin bilisummaa! Walabummaa! Jedhaa dhaadata. Hojiin isaatiin ammoo, tooftaa fi tarsimoo
qabsoo bilisummaa fi walabummaa Saba gonfachiisan nyaata. Afaaniin tokkummaa faarsa.
Hojiin ammoo, tokkummaa diiga. Maafiyaan kun, afaaniin jaalala Oromoof qaba jedha.
Gochaan garuu, ganda isaatiin ala jibba lammiiwwaan Oromotiif qabu hojjata. Maafiyaan kun,
ganda isaatiin ala, lammiwwan Oromoo hundaa akka masaanutti (arch-enemy) ilaala.
Xiyyeeffanaa fi adeemsi murna kanaa, Oromoo moggeessuu fi facaasuu, qabsoo bilisummaa
Oromoo laamshessuu, maseensuu fi bu’aa dhabiyyee godhee hambisuu dha. Hojiin Maafiyaa
kanaa har’a, mataa irraa hamma miillatti tortoree ajaawee jira. Haalli kun, har’a ragaa ifatti
mul’ataa Maafiyaa Horroo Guduruu ti.
Previous GAAFFIIN OROMOO IMPAAYEERA OLTUUM HABASHOOTAN IJARAMEE KEESSATTI DEEBI’UU HIN DANDAYU
Next Ministeera Barnoota Itiyoophiyaa: Qorannaa Oromiyaan Gaggeesseetu Lafa Qormaanni Itti Kennamuu Danda’uu fi Turfamuu Qabu Murteesise
Hedduu rakkattan!!!!!!!!!!!!!! Oromoo gandaafi lafaan addaan basaawuun diinummaa moo maali? hujjii diinaa akka hojjachaa jirtan beekkamaa tahaa dhufaa jira. Kan eergaa diinaa hujjii irra oolchuuf wixxirfaturra, kan waan akkanaa kana maxxansuutu magani/raajjii. Hundaafuu, qabsoon kashlabbeedhaan waan hin jaarmneef kashalbbeen humaa tahuu hin dandeessu.
Tooftaa dulloomaa dha kun,Oromoon as irra darbee jira CR namni kana si irraa bitatu hin jiru ,sababi isaas ati hoo wayyaneetu girshii shaniin si bittee ,waan oromoo diigu ,gandummaa,amantii fi gareen akka oromoo qoodduuf FB fi Paltalk irratti si ramaddee jirachuu oduun wayyanee jalaa hatame ni himaa .Kanaaf waan siif kennan sana nyaadhuu ti afaan kee qabadhuu ta’i ,akkuma sitti guutan san gadi baatee of keessaa hin albahin ,qarbata abbaa kee lafti haa nyaatuu.kkkkkk Dawud Ibsaa urjii QBO oromoo ti si dhiisii wayyanenuu ni sodaatti ,kanaaf callisii tahi qarbata wayii dawullaa.
Caffee Rammis.com nuti si’ii tokkummaa oromoo diigu agarra malee ,Dawud tokkummaa oromoo diigu agarree hin beeku ,Dantaaf bitamuu jechuun nama akka kee diinaan bitamee Paltalk fi FB irratti QBO irratti olola oofu jechuu dha. ykn nama akka kee kana qarbata ,garaa isaa malee gabroomun saba ofii itti hin dhagamne jechuu dha ,kanaaf ati doofaa dha waanuma sitti guutan gadi baatee of keessaa albaata. namni diinummaa kee si irraa nagadatu hin jiru.Oromoon waan ati gootu kana irra guddateera .Dawud Ibsaa warri si bitee si fagsiisu iyyuu ni dadhaban kanaaf afaan kee qabadhuu waan siif kennan sana nyaadhuu tahi .Fagaraan yaaduu dhiisii sammuun yaaduu yaali. ajaawaa.
Namni kun gadigaloo namaati. Hashara Oromoo ti malee dhiiga Oromoo nama qabuu miti dhibbaa dhibbatti. Waan kana kan maxxasuus, gaazexeesitummaa xiqqollee kan qabu ykn kan barate hin fakkaatu ykn diina. Akkamitti namni waan Oromoof hin tole oloola rakisha akkanaa yeroo maantanatti maxxansa. Maxxansullee waan raga qabatamaa qabu yoo tahe gaafachuu fi mirhkaneefachuu qaba. Abbaa Bilisummaa.com oromoof raga dhiheessi.!!!!!!!!!!!!!!